Akụkọ - Akụkọ banyere osi ite
China malitere imepụta ihe eji esi nri na 1980s, mgbe ihe ruru afọ 30 nke mmepe, ụlọ ọrụ na-esi nri na-eme ka mmepe mmepe na-aga n'ihu, onye na-esi nri na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ ndị mmadụ.
Na 2005, ụlọ ọrụ na-esi nri nke China toro ngwa ngwa site na ntinye nke nde 14.5, mmụba nke 87.34 pasent karịa nde 7.74 na 2004. Na 2005, ọnụego ahịa kwa afọ nke onye na-esi nri ọkụ bụ 13,76 nde, nke mụbara karịa 90% jiri ya tụnyere nde 7.205 na 2004.
Na 2006, mmepe mmepe ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ nke China mepụtara ngwa ngwa, mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị nde 22, elu 51.72% n'otu oge ahụ na 2005, mbupụ kwa afọ nke nde 2.1, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% dị elu karịa otu oge na 2005, onye na-esi nri ọkụ, na-aga n'ihu melite ogo nke akara iri nke oke ahịa ahịa iri kachasị elu nke 92.6%, gaa n'ihu na ntinye akara ahịa ahịa nke mbụ, onye na-esi nri na kichin kichin bụ ijide anya n'ọtụtụ ngwaahịa.
Na 2007, mgbe ebusiri ọnụahịa nke igwe ihe eji eme ihe microcrystal panel, akụkụ nke ụlọ ọrụ na-ere ihe ọkụkụ nke Galanz, Midea, Jinling, Kewei, wdg malitere malitere "ọnụahịa agha" .Ọ bụkwa nke a nke agha ọnụahịa, mee otu ogbe nke ụlọ ọrụ electromagnetism nke na-awagharị n'okwu na-enweghị isi n'ihi ngwaahịa a na-apụghị ịkọwapụta na mbụ furu efu kpamkpam, na-emekwa ka akara ngosi nke ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye mma. Na 2007, ngbanwe nke usoro ihe eji esi mmiri ọkụ buru ibu, na Ọktọba enwere 20. E kpochapụrụ% nke ụlọ ọrụ ahụ.
Induction cooker mgbe ha nwetachara ọganihu na 2005, ọkara nke abụọ nke 2006 zutere "Waterloo" ruo mgbe 2007 gara n'ihu na-esighi ike, banye na nkeji nke atọ nke 2008, ahịa ndị na-ere ihe ọkụ ọkụ webatara otu afọ na ire ere nke obere oge. Nsogbu ego zuru ụwa ọnụ na mmebi akụ na ụba, obere ngwa ngwa na mkpokọta uto na-ada na ụlọ ọrụ ngwa ụlọ ụlọ pụrụ iche. Na 2008, ụlọ ọrụ ụlọ na-etinye aka n'ichepụta ngwa ngwa obere ụlọ na ụzọ atọ mbụ nke uto.